"खुला विन्डो" (2014) महत्वपूर्ण प्रशंसा मुख्य रूप सहयोग कमाए। जो यो newfangled मुड रोमाञ्चक भएको सिप-प्रसिद्ध अभिनेता गुणस्तर निर्धारित लिपि overshadows र चरमोत्कर्षलाई बिल्कुल आश्चर्यजनक छ।
विचार र कार्यान्वयन
फिल्म निर्देशक Nacho Vigalondo नवीनतम प्रविधिहरू (क्लासिक क्यामेरा बरु केवल एक वेब क्यामेरा) को प्रयोग गरेर मात्र, मेरो बच्चा गोली। तदनुसार, फारम चलचित्र मा mokyumentari शैलीमा बाहिर आए, तर एक सानो विभिन्न। यस समय को सबै भन्दा स्पेक्टेटर जो भिडियो रेकर्डिङको एक विशिष्ट अर्डर Windows देखा पर्दा, मा देखिन्छ। यो कथा सबै विलक्षणता लागि कथा तल भण्डारण तार्किक लिंक र स्थिरता खण्डन छैन। परियोजना "खुला विन्डो" (प्रतिक्रियाहरू पुष्टि) पक्कै गोली गर्दा हेर्दै फिलिमहरु उत्पन्न छैन विधा psevdodokumentalistiki मा जस्तै कमजोर vestibular सिस्टम, चक्कर आना मानिसहरूलाई देख्न सक्छौं।
तर फिल्म को प्राविधिक पक्ष कला गर्न दर्शक "ठूलो सफलता", त्यसपछि प्राप्त भने, त्यहाँ केही दावा छन्। को कहानी को धेरै चरमोत्कर्षलाई द्वारा केहि यसको अपील र पार्थक्य हराएको छ। त्यहाँ लेखकहरूले आफ्नै "व्यापक डेलाईट" मा भ्रमित छन् र kibertriller paranoid हुन जान्छ भावना छ।
यो सही ढंगमा चित्रकला को कथा लाइन विकास निर्धारण के वाक्यांश हुन सकेन छ "विन्डो खोल्नुहोस्।" समीक्षा देख्यो छन् सहमत - को protagonist अनजानमा षडयंत्र नेटवर्क को वेब मा आएको गरिएको। तर पहिलो कुरा पहिले। शानदार फिलिम तारा जिल गोडार्ड एक प्रबल प्रशंसक उनको नयाँ काम को प्रस्तुति धाउन अस्टिन आउने निक नाम। प्रशासक, प्रशंसक साइटहरु को सबैभन्दा ठूलो तारा रूपमा, निक उपासनाको वस्तु भोजन र साइट एक विशेष साक्षात्कार लिन मौका जित्छ। यो क्षण पूर्ण भएको ट्रेलर, illuminates "विन्डो खोल्नुहोस्," त्यसपछि जवान अज्ञात नम्बर देखि एक कल प्राप्त जो elated मा प्रसङ्ग जारी छ। गुप्त मात्र भनिन्छ कर्ड रहन कामना गर्ने कलर, यो खाने रद्द छ कि नायक सूचित गर्नेछौं, तर एक सान्त्वना ताराहरूको विशेष फोटो प्रदान गर्दछ रूपमा। निक उहाँको आदेश केही गर्न आवश्यक - र प्रशंसक होटल को कोठा मा लुकेका क्यामेरा, र पनि अभिनेत्री हैंडबैग संग लिएको तस्वीर प्राप्त। त्यसैले, आफ्नै मूर्खता अनुसार जवान एक षडयंत्र मा पुगियो, र फिर्ता कुनै तरिका छ। आफ्नो कार्य को प्रेरणा बुझ्न, बस लागि रूसी को ट्रेलर हेर्न। सबैभन्दा विज्ञापन मा "Windows खुला" आवश्यक छैन।
ओह, यी Tales! ओह, यी storytellers!
यसलाई गरिएका रूपमा, स्पेनको निर्देशक Vigalondo बस irrepressible कल्पना, यसबारे यसको लेखक दृश्य, र समय छैन तुरुन्तै स्पष्ट, चित्र ढाँचा निर्माण endlessly तर्क गर्न सक्छन् छ। तर यो के गर्न राम्रो छ, र एक आश्चर्यजनक सोली घटनाहरु, भावना, भावना, र वर्ण मा प्रवेश, र यो त भइरहेको छ के को समझ आउँछ थियो। "को Windows खोल्नुहोस्" - शक्ति र दृश्य दायरा बल द्वारा एक फिलिम एम Gondry वा कामहरू तुलना छ टी Gilliam, Sheckley आर र स्तर को tends कार्य को दृश्य मा एक मोड एस एलईएम। एकै समयमा चित्र परंपरागत छ पहिलो छोटो चलचित्रमा उद्देश्यले निर्देशक को सामान्य झुकाव रहन्छ।
काठ र ग्रे - अत्यधिक विवादास्पद संयोजन
प्रमुख गायक र सानातिना भूमिकाको सहित सबै ज्ञात तारा उपस्थिति घमण्ड गर्न सक्ने एक फिलिम - "को Windows खोल्नुहोस्"। Vigalondo सुरुमा अस्पष्ट वा साईट अभिनेता भाग हुनत यो फिल्म सेलिब्रेटीहरू भरिएको छ। कि सबै भन्दा दर्शकहरूलाई एक फिलिम इतिहास साशा ग्रे र एलिया काठ मा संयोजन गर्न सक्छन् कसरी, तर चित्र को सफलता प्रदर्शन गर्ने को राम्रो विकल्प र सही डाली कास्टिंग पुष्टि गर्छ बुझ्दैनन् मानौं। काठ परंपरागत inconspicuous सानो "निर्दोष" नजर आफ्नो मुकुट संग एक कडाई चिटिक्क buttoned शर्ट मा सामान्य रूपमा "बेवकूफ" को रूपमा faultless छ। हेर्दै ट्रेलर "खुला विन्डो" वा सिनेमाको पहिलो आधा, तपाईं वर्ण एलियाको असजिलोपन एक अर्थमा, रिसले महसुस: ठीक छ, तिमी कसरी त्यस्तो डरछेरुवा हुन सक्छ?! तर दोस्रो आधा जयकार दर्शक "Frodo," उहाँले पूर्ण rehabilitated गर्नेछ। खराब कूटवेश अन्तर्गत मुख्य antagonist नील Meskell, ब्रिटिश टिभी श्रृंखला मा "स्वप्नलोक" एक सानो भद्दा हत्यारा प्ले जो Arbi लुकाउने छ। तर नेतृत्व भूमिका मा साशा ग्रे अचम्मको छ, र साथ skromnyagi काठ यसको संयोजन बस भव्य। कारण फिलिम को प्रसिद्ध अभिनेता रील उपस्थितिको, पाठ्यक्रम, अतिरिक्त रकम बक्समा कार्यालयमा, केहि विशिष्ट यो वास्तवमा निर्देशक को हुनत रचनात्मक शैली ल्याउनेछ।
"म एक PORNO मा तारा अङ्कित कहिल्यै!"
साशा ग्रे द्वारा जिल गोडार्ड द्वारा uttered यो वाक्यांश, indescribable उत्साह दर्शक संग प्राप्त भएको थियो। सबैलाई यो सामाग्री को एक नाटकीय प्रस्तुति मा विशेष योग्यता, अभिनय र निकै कमजोर फरक छैन थाह, तर यसको scandalous रेल पाठका कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। खैरो भूमिका स्वीकार त्यो प्रशंसक, को प्रशंसक र वैश्विक इन्टरनेट समुदाय बाट निरन्तर ध्यान थकित थियो किनकी, भूमिका त्यो आत्मा मा बन्द भएको थियो भनेर। फिल्म "खुला विन्डो" आलोचकहरु अग्रणी महिला तिर चापलुसी पूर्ण भएपछि, उनको काम बभयोयामी र बहुमुखी भनिन्छ। उनको प्रयासमा धन्यवाद, फिल्म सिकार र खेदो बारेमा mediocre रोमाञ्चक बन्न गर्दैन। "किनभने, एक ल्यापटप अधिक frail फिर्ता एलियाले काठ, झुकेको peeping छाती साशा ग्रे को" प्रकार को फ्रेम हुनत, संकोच उज्यालो ओढ्ने ढाकिएको albeit, स्पेक्टेटर दर्शक को ध्यान यो दोस्रो योजना, टी को विवरण गर्न RIVETED। ई धेरै छाती।
विक्षेप वा समस्याका?
फिलिम 2014 "खुला विन्डो", वास्तवमा, त्यहाँ एक निजी जीवन, व्यक्तिगत स्पेस, गोपनीयता रूपमा कुनै यस्तो कुरा हो जहाँ हाम्रो आधुनिक विश्व, को तर्क छ। डिजिटल प्रविधि को प्रभुत्व, ग्याजेटहरू सबै प्रकारका हामीलाई प्रत्येक सम्भाव्य सिकार बनाउँछ। मात्र तिनीहरूलाई मनसाय प्रकट कुनै पनि आक्रमणकारीहरूलाई हामीलाई आईफोन क्यामेरा अनुगमन सडक मार्फत हाम्रो नै वेब क्यामेरा मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ। विक्षेप - तपाईं भन्न? शायद। बस हिजो, त्यस्तो दावी मा हसाउने हुनेछ, तर लीक घर भिडियो, प्रसिद्ध व्यक्ति फोटो हामी सबै धेरै कमजोर छन् भनेर प्रमाणित। तपाईंको आफ्नै रहस्य चाहन्थे छैन भने पनि, यो खलनायक को हात मा एक साधन बन्न सक्छ, त्यसैले काठ को वर्ण के थियो।
यस चित्रकला को अन्तिम "खुला विन्डो" (समीक्षा र आलोचकहरु, र साधारण दर्शकहरूलाई एकमत) यो पनि षड्यन्त्र र इच्छा संग आधा द्वारा चतुर निर्देशक अनपेक्षित मोड देखाउन देखिन्छ, एक बिट निरर्थक छ। रोचक छ यो फिल्म, एक पहेली जस्तै समाप्त परिणाम विचार भन्दा सङ्कलन गर्न। सबै timing ढाँचा - एक ठोस ड्राइव, भावनात्मक तीव्र, एक डरलाग्दा छाप छोडेर। आधुनिक सिनेमा मा शायद यो थप विकास गर्न आवश्यक छ, यस्तो राम्रो-बुझे अवधारणा फेला परेन। छोटकरीमा भन्न - हामी एक sequel आवश्यकता हो, र यसको लागि पूर्वापेक्षा प्रशस्त। एक gripping कहानी र गतिशील विकासक्रम, शानदार अभिनय खेल संग सजाया तीव्र थ्रिलर्स सबै प्रशंसक गर्न चलचित्र 2014 "खुला विन्डो" हेर्नको लागि सिफारिश गर्न सकिन्छ।
"मूर्ख गरेको गोल्ड," "फिल्म" फूल को घर "को समीक्षा मूर्ख।" फिल्म "मूर्ख": आलोचकहरु
ठूलो छडी नीति, वा "ठूलो छडी" नीति। यो के हो?
Vorkuta Diocese र साइकेटिभकर: वर्णन, इतिहास, विशेषताहरु र रोचक तथ्य
मासुबल सूप कसरी गर्ने (चरण दर विधि)। सुपमा मासुबल र नूडलहरू, चावलको साथ
बिल्लियों को ठूलो नस्लों को लागि एक गुणवत्ता को खाना कसरि चुन्नुहोस?
पनीर संग Patties - चरण नुस्खा फोटो द्वारा एक कदम